Rehefa lasa Datacenters ny mall ... | Martech Zone
Alahady, Jona 29, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Omaly dia andro nahafinaritra tao Ny amboaram-boanjo. Patric nijanona avy Noobie, Doug Theis avy any Datacenters momba ny androm-piainany ary taty aoriana ny andro, Adama avy any Alefaso amin'ny alàlan'ny fangatahana.
Ny Lifeline Datacenters dia manana tantara mahafinaritra sy mahatsikaiky tokoa ao amin'ny tranokala Eastgate Mall vaovao. Ny Indianapolis Business Journal dia nanao tantara tamin'izy ireo rehefa nahavita ny fividianana izy ireo, fa izao kosa velona izao ilay fotodrafitrasa. Izy io dia mpizara daty feno aseho miaraka amin'ny lakolosy sy siotsiôna rehetra, ary mino aho fa ny hany Tier IV any Indianapolis - ary ny lehibe indrindra ao afovoany andrefana.
Sary avy amin'ny DeadMalls.com.
Ny Eastgate Mall dia natsangana tamin'ny taona 50 ary niroborobo tamin'ny taona 70. Izy izay dia maty tamin'ny fomba ofisialy taorian'ny 50 taona ny fanompoana. Niorina tamin'ny haavon'ny fananganana Nuke niaraka tamin'ny USSR, ny sasany amin'ireo toeram-pivarotana dia manana bunker ambanin'ny tany izay natsangana niaraka tamin'ny trosa federaly tamin'izany fotoana izany. Ka eto dia manana toerana misy rakipeo toradroa amina taonina ianao, fidirana amin'ny fifamoivoizana, famahanana herinaratra marobe, generator, fampangatsiahana, fialofana baomba… ary maty ny magazay.
Inona no ataonao amin'ny magazay tsy misy na inona na inona?
Manamboara datacenter ao, mazava ho azy! Tsy azoko antoka hoe iza no nanana ny fahitana voalohany ho an'ity tetikasa ity, saingy mamirapiratra - ary mahatsikaiky. Ankehitriny fa ny ampahany betsaka amin'ny antsinjarany dia nifindra an-tserasera, nanao ahoana ny fihenan'ny fivarotana lehibe ho lasa datacenter? Io no mahatsikaiky farany ao amin'ny bokiko! Eastgate dia mety nanidy ny varavaran'ny fifamoivoizana an-tongotra taona vitsivitsy lasa izay, saingy manana ny fahafahana hitsangana amin'ny maty ho iray amin'ireo 'mall' be mpividy indrindra eto amin'ny firenena!
Hanandrana manamboatra fotoana hizaha fitsangantsanganana miaraka amin'i Doug aho amin'ny herinandro ho avy. Tsy andriko ny hahita ny zava-bitany!
Tags: tsenambarotra atsinananaivon-data angovo
Fikarohana tranokala Google ao amin'ny SERP?
29 Jiona 2008 à 6:50
Ny karma amin'ny toeram-pivarotana dia ny reincarnate amin'ny maha-ivon'ny angona… misy dikany izany. Izany no antsoina hoe "e-budism"?
29 Jiona 2008 à 8:39
Tiako ny Cup Bean ary niresaka taminao Doug. Mila manao izany matetika kokoa isika. Ary isao aho rehefa mahazo fitetezam-paritra (ilay iray hafa) ivon'ny data vaovaon'i Doug ianao!
29 Jiona 2008 à 10:50
Miombon-kevitra amin'ny e-budism aho.
Tena mahafinaritra ny momba ny toeram-pivarotana! Tsy fantatro fa i Doug dia nanao zavatra toy izany. Mahafinaritra izany!
Jun 29, 2008 ao amin'ny 5: 14 PM
Misaotra tamin'ny fankasitrahana, Doug. Nahafinaritra ahy ny niresaka taminao sy Patric ary ny mpiasan'ny Bean Cup omaly. Hahazo fitsidihan'ny Eastgate ho anareo izahay.